नेपालको पर्यटनलाई नयाँ आयामबाट हेर्ने समय आएको छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता नेपालको पर्यटनलाई नयाँ आयामबाट हेर्ने समय आएको छ
अन्तरवार्ता4views
नेपालको पर्यटनलाई नयाँ आयामबाट हेर्ने समय आएको छ
वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी तथा संयोजक
नेपाली मौलिक खाना महोत्सव आयोजक समिति
उमेरले ७५ कटेका वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यसँग वातावरण संरक्षक, लेखक, सकारात्मक सोचका अभियन्तालगायत परिचय जोडिएर आउँछन्। परिवर्तनको लागि सधैं सकारात्मक सोच आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने शाक्य नेपाल सरकारले पहिलोपटक आयोजना गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ का संयोजकसमेत हुन्। अहिले उनी नेपाली मौलिक खानालाई विश्वव्यापी बनाउने अभियानस्वरूप नेपाली मौलिक खानाको अध्ययन अनुसन्धान तथा खाना महोत्सव गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। अन्य विभिन्न देशको खानाले विश्वबजारमा प्रवेश पाइरहँदा खानाको संस्कारमा धनी भएर पनि नेपालीहरूले भारतीय खानालाई आफ्नो बनाएर बेचिरहेको बताउने शाक्य यो अभियानलाई विश्वव्यापी बनाउने अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनले ‘कर्ण सकारात्मक कोष’ मार्फत विभिन्न कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिरहेका छन्। शाक्यसँग नेपाली मौलिक खानाको प्रवद्र्धनका लागि भइरहेको कार्य, नेपालको समग्र पर्यटन तथा उनको कर्ण सकारात्मक कोषलगायतका विषयको सेरोफेरोमा रहेर आर्थिक अभियानका टीपी भुसालले गरेको कुराकानी :
नेपाली मौलिक खानाको प्रवर्द्धन अभियान शुरू गर्नुभएको छ । यो अभियानको उद्देश्य के हो ?
नेपाल बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकोले हामीसँग सयौं प्रकारका खाना छन् । हामी ८४ व्यञ्जनका कुरा गर्छौं । तर, त्यसको अध्ययन अनुसन्धान केही गर्न सकेका छैनौं । स्थानीय रैथाने खाना पनि पर्यटन विकासको एउटा प्रमुख आधार हो । जिब्रोमा झुण्डिने मीठो परिकार खानकै लागि समेत करोडौं मानिस संसारभरि घुमफिर गर्दछन् । सयभन्दा बढी जातजाति तथा भाषाभाषी भएको हाम्रो देशमा सयौंको सङ्ख्यामा मौलिक खानाको समृद्ध संस्कृति छ । विश्वको ८० भन्दा बढी मुलुकमा फैलिसकेको नेपाली जातिको बसोबास छ । तिनले सञ्चालन गर्ने नेपाली रेस्टुराँ, व्यवसाय तथा कतिपय देशका पाँचतारे होटलका सेफलगायत गरी ४–५ हजारभन्दा बढी नेपाली सेफहरू विदेशका कुनै न कुनै होटलहरूमा काम गरिरहेका छन् । एनआरएनलगायत नेपालीहरूले नै सञ्चालन गरेका हजारौं रेष्टुराँहरू छन् । तर, ती ठाउँमा नेपाली खानाको नाममा भारतीय खानाहरू विक्री गर्दै आएका छौं ।
योे परिप्रेक्ष्यमा नेपाली खानालाई अझ परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै विश्वव्यापीकरण गर्नु नेपाल र नेपालीको हितका लागि आवश्यक भन्ने सोचले हामीले यो अभियान शुरू गरेका छौं । समृद्ध खानाको संस्कृतिले देशको मान मर्यादा र पहिचान बढाउने, इतिहास र सभ्यताको साथै रीतिरिवाज र संस्कृतिको उजागर गर्दै पर्यटन विकासको बलियो आधार तयार गर्न सक्ने हुँदा यी सकारात्मक लाभहरू नेपाली पर्यटन उद्योगमा थप्न नेपाली खाना विश्वव्यापीकरण गरिनु अर्को उद्देश्य हो । यस्तै, विकासका व्यापक सम्भावना बोकेको नेपाली पर्यटनले पनि आफ्नो मौलिक खानालाई अन्तरराष्ट्रियकरण गरेर एउटा थप बलियो आधारको विकास गराउनु पर्दछ । खाना प्रत्यक्ष रूपमा जनजीवन, रीतिरिवाज, चाडपर्व, भूगोल, प्रकृति एवम् हावापानीसँग जोडिने हुँदा पर्यटकले खानाको माध्यमबाट स्थानीय जनजीवन रीतिरिवाज चाडपर्वसँग नजिकबाट आत्मसात् गरेका हुन्छन् । यसरी नजिकबाट अनुभूत गरिएको अनुभूतिले पर्यटकमा स्थायी छाप छोड्ने हुँदा पर्यटन मूर्तरूपमा जीवन्त रही विकास र विस्तारको मजबुत आधार बन्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यही मान्यतालाई मूर्तरूप दिन यो अभियान शुरू गरेका हौं ।
अभियान कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? यसलाई मूर्तरूप दिन के कस्ता कार्ययोजना वा कार्यक्रम छन् ?
विश्वमा नेपालको छवि प्रकृतिक सुन्दरता, बुद्ध जन्मेको देश, सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित अग्ला हिमालको देश तथा संसारभरि वीरताको पर्यायको रूपमा रहेका ‘गोर्खा’ भन्ने छ । यसका अलावा हामीसँग खानाको पनि समृद्ध संस्कृति छ । देशमा उपलब्ध हिमाली जडीबुटीलाई मसलाको रूपमा प्रयोग गरी पकाइने खानाको रूपमा पनि प्रसिद्धी प्राप्त गर्ने हामीलाई अवसर छ । त्यो अवसरलाई हामी यथार्थमा बदल्न प्रयासरत छौं । यसका लागि हामीले होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) र सेफ एशोसिएशन नेपालसँग मिलेर केही परिकार बनाएर त्यसको परीक्षण र प्रदर्शन गरेका छौं । यसलाई मूर्तरूप दिनका लागि ३ महीनाभित्र हिमाल, पहाड, उपत्यका तथा तराईका मौलिक खानाको विस्तृत अभिलेख तयार गर्दै छौं । सङ्कलित अभिलेख मध्येबाट छनोटका स्पष्ट आधार र प्रक्रियाबाट पहिलो चरणमा २० मौलिक नेपाली खानालाई आवश्यकताअनुसार परिष्कृत गरेर विस्तृत विवरण (आवश्यक सामग्री, पकाउने विधिसमेत) तयार पारी पुस्तक, ग्लोबल वेबसाइट, एप जस्ता सामाजिक सूचना सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने हाम्रो तयारी छ । यस्तै, छनोट गरिएका २० मौलिक नेपाली खानालाई नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाली नियोगहरू, एनआरएनए सञ्जाल, युनेस्कोलगायतका सरोकारवाला सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा निरन्तर प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा नियमित रूपमा नेपाली फूड फेष्टिभलजस्ता ठूला, स्तरीय र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने, सम्भाव्यताको आधारमा क्रमिक रूपमा अन्तरराष्ट्रिय प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
नेपाली मौलिक खानाहरूको सङ्ख्या बढाउँदै संसारभरि नेपाली खाना पस्किने रेष्टुराँ, क्याटरिङ व्यवसाय बढाउन सरकारलगायत सम्बद्ध सबैसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने हाम्रो योजना छ । यो कार्य सम्पादन गर्न मेरै संयोजकत्वमा प्रतिष्ठित सेफ, व्यावसायिक फूड टेक्नोलोजिष्ट, डाइटिसिएनलगायत होटल सङ्घ नेपाल, रेष्टुरेण्ट एण्ड बार एशोसिएशन अफ नेपाल र सेफ्स एशोसिएशन अफ नेपाललगायत सम्बद्ध सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएको एक कार्यदलले कार्य प्रारम्भ गरेको छ । कार्यदलले समयबद्ध ढङ्गले तोकिएको निश्चित समयभित्र काम गर्ने गराउनुका साथै विषयवस्तुसँग सरोकार राख्ने सबैसँग सहकार्य गरिरहेको छ । हामी यही मङ्सिर २९ गते नेपालमा खाना महोत्सव गर्छौं । त्यहीँबाटै यो अभियानको अन्तरराष्ट्रिय शुरुआत हुन्छ ।
नेपाल सयभन्दा बढी जातजाति, भाषाभाषी भएको बहुसांस्कृतिक देश भएको र यहाँ सयौं मौलिक खानाहरू रहेकाले ती सबै खानाको प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ ?
हाम्रो व्यञ्जन ढुकुटीमा अथाह परिकार छन् । तर, विदेशी पारखीहरूको जिब्रोमा ती स्वादहरू झुण्ड्याउन सकिएको छैन । भोज, थाली, खाजाले मात्र नेपाली रेष्टुराँको मेनु पूर्ण हुन सक्दैन । नेपाली खानालाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न रैथाने परिकारहरूलाई परिमार्जन गरी वैज्ञानिक आधारमा उपयुक्त क्यालोरीयुक्त बनाउने विश्वका विभिन्न स्थान र त्यहाँको हावापानीअनुसार सहजै पाच्य हुने किसिमले स्वास्थ्यवर्द्धक बनाउन सक्नु पर्दछ । हामी सबै खानाको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ३० ओटा नेपाली मौलिक खानालाई परिमार्जन गरेर मेनुमा राख्ने काम गरिरहेका छौं । किनभने नेपाली खाना भनेको दालभात मात्र हो भन्ने खालको दृष्टिकोण छ । कम्तीमा पनि ३० प्रकारका परिकार राख्दा त्यसले धेरै परिकारको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
चाइनिज, इण्डियन, कण्टिनेण्टल खानाहरूले विश्वप्यापी रूपमा एकाधिकार जस्तो देखिएको अवस्थामा नेपाली मौलिक खानालाई व्यावसायिक रूपमा लैजान सक्ने सम्भावना छ त ?
हाम्रो यो अभियान नेपालमा होटल तथा रेष्टुरेण्टलाई लक्षित गरेर गरेको होइन । यसलाई विश्वव्यापीकरण गर्ने भन्नेबित्तिकै यसको व्यावसायिकताको कुरा त आइहाल्छ । अमेरिका, युरोप, जर्मनी, जापानलगायतका मुलुकहरूका यसको प्रवर्द्धन गर्ने हो । यसलाई अलिकति परिमार्जन गर्न जरुरी छ । हामी त्यो काम पनि गरिरहेका छौं । स्वाद र प्रस्तुतीकरणमा परिमार्जन गरेर विश्व खाद्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नै हामी तयारी गर्दै छौं । हाम्रा सेफहरूले यसको काम गरिरहनु भएको छ । हामी चिल्लो, पिरो, अमिलो बढी खान्छौं । विदेशीहरू कम खान्छन् । यसैले हामी परिमार्जनसहित यी परिकार तयार गरिरहेका छौं ।
थाई, मलेशियन, भियतनामी, क्याम्बोडियाली, लावोसियन खाना विश्वभरिका रेष्टुराँहरूमा राम्ररी स्थापित भइसकेको हालको स्थितिमा नेपाली खाना पस्कने नेपाली रेष्टुरेण्टहरू तथा नेपाली सेफहरूले पनि विश्वका कतिपय शहरमा उत्कृष्टताको पदक प्राप्त गरेका छन् । यस्ता उदाहरणहरू भएता पनि समग्रमा नेपाली मौलिक खानाहरू पस्कन खोलिएका विश्वभरिका धेरै नेपाली रेष्टुरेण्टहरूमा बजारका मागअनुरूप नै मःम र केही प्रमुख नेपाली खानाबाहेक अधिकांश भारतीय र एशियाली खानाहरू नै बेच्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै धेरै पश्चिमी मुलुकहरूमा नेपाली खानाहरू अझसम्म पनि भारतीय रेष्टुराँको एनेक्स मेनुभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने पक्वान भनेको पेट पूजाका लागि मात्र हैन, व्यञ्जनको कलात्मक प्रस्तुतीकरण पनि हो र त्यसलाई प्रचारप्रसार गरेर विश्वमा नेपाली स्वादको परिचय दिन सक्नु पर्दछ । हामी यसमा आवश्यक क्यालोरीसहित हिसाब गरेर यसको परिकार तयार गर्दछौं । यसमा हामीले विभिन्न ५ ओटा स्वादभित्र रहेर परिकार तयार गर्दै छौं ।
यो अभियानलाई अघि बढाउन सरकारी स्तरबाट सहयोग कस्तो छ ?
यसमा व्यवसायी मात्र तातेर हुँदैन । राज्यले यसलाई संस्थागत रूप दिन जरुरी छ । कुनै पनि देशले पर्यटनका लागि आफ्नो सम्पदा, संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । त्यसको लागि भौतिक सम्पदाका साथै सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ । खाना सांस्कृतिक सम्पदा हो । नेपालको पर्यटन विकासका लागि हामी सबै मिलेर नेपाली खानाको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै यसलाई अघि बढाउनु पर्छ । अहिले पूर्वी नेपालमा कम्तीमा पनि ३ सयभन्दा बढी परिकारहरू छन् । त्यसको अध्ययन, अनुसन्धान भएको खोई ? यो हामी सबैको साझा दायित्व हो । तर, यसको प्रवर्द्धनका लागि सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जस्तो, विदेशी पाहुना नेपाल आउँदा होस् या विदेश भ्रमणको समयमा होस्, नेपाली कार्यक्रमको अवसरमा विभिन्न देशमा भएका नेपाली दूतावासहरूमा हामीले विदेशी विशिष्ट पाहुनाहरूको सम्मानमा भोज आयोजना गर्ने गछौं । त्यसबेला हामीले गर्वका साथ उनीहरूलाई नेपाली मौलिक परिकार खुवाउन सक्नुपर्छ । यसले पनि हाम्रो खानाको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्दछ । अरू विभिन्न ढङ्गले पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले यसमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छन् ।
तपाईंसँग ‘नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८’ को संयोजक भएर काम गरेको अनुभव छ । सरकारले २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउन तपाईंको के सुझाव छ ?
हो, ‘नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८’को संयोजक भएर मैले काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ । सौभाग्यवश त्यो कार्यक्रम नेपालको पर्यटन इभेण्टमा एउटा कोशेढुङ्गाकै रूपमा लिने गरिएको छ । हामीले त्यतिबेला ५ लाख पर्यटकको अपेक्षा राखेका थियौं । त्यसका अतिरिक्त त्यही समयदेखि नेपालमा आन्तरिक पर्यटन वर्षको शुरुआत पनि त्यही बेलाबाट भएको हो । ‘पानको पात र रेशम फिरिरी’ बोलको गीत मात्र चल्ने रेष्टुरेण्टहरूमा त्यस बेलादेखि दोहोरी गीत शुरू भयो । अहिले त्यसको राम्रो बजार छ । पर्यटन व्यवसाय जीवन्त बनाउन सके मात्र पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास सम्भव छ ।
नेपालमा कोही हिमाल हेर्न आउने होला, कोही मठमन्दिर हेर्न आउने होला, कोही साहसिक खेल खेल्न आउने होला । नेपाली पर्यटन क्षेत्रको विविधता धेरै छ । तर पनि हामीले आफै खासै गर्न सकेका छैनौं । १९९८ मा ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यपछि हामी ८–१० लाख पर्यटक भनेर बसिरहेका छौं । तर, पर्यटकका लागि नयाँ प्रडक्ट खोई त ? हिजो विदेशीले वन्यजन्तु भन्यो, एक/दुई ओटा पदमार्गको बारेमा बताएर गयो, आज हामी त्यहाँभन्दा माथि निस्किएको खोई ? हिमाल मात्र देखाएर वा लुम्बिनी मात्र देखाएर बस्ने कि अरू पनि नयाँ गन्तव्य र सम्भावनाहरू खोज्ने ? तालै तालको देश, गुफै गुफाको देश, झरनै झरनाको देश । तर न एउटा तालको नाम थाहा छ, न एउटा झरना वा गुफाको नाम थाहा छ । त्यसको अध्ययन गर्नु पर्‍यो, त्यसको प्रचारप्रसार गर्नु पर्‍यो । यतापट्टि हाम्रो ध्यान जानुपर्‍यो ।
नेपाल त पर्यटनका लागि सम्भावना नै सम्भावना भएको देश हो । म तपाईंलाई एउटा तथ्याङ्क भन्न चाहन्छु । आजको ३० वर्ष पहिले एउटा पर्यटक ट्रेकिङ जाँदा ९० डलर तिथ्र्यो । अहिले त्यो घटेर ३०–३५ डलर भएको छ । जबकि अहिले अन्य सामानको मूल्य दोब्बर भइसक्यो । यसको कारण नयाँ रूट, नयाँ गन्तव्यको विकास नगर्नु हो । सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउँदै गर्दा हामीले ती प्रडक्टका बारेमा छलफल गर्न जरुरी छ । अहिले नेपालको पर्यटनलाई नयाँ आयामबाट हेर्ने र परिभाषित गर्ने समय आएको छ । मेरो विचारमा अब पर्यटनलाई खेलसँग जोडेर यसको प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मात्र भनेर पुरानै ढङ्गले अगाडि बढ्नुभन्दा यसलाई साहसिक खेल पर्यटनसँग जोडेर जान सकिन्छ । हिजोको पर्यटक ‘कनभेन्सनल’ स्वभावको थियो । अहिलेको पर्यटक साहसिक पर्यटनमा रुचि राख्छ । त्यता ध्यान दिनु पर्‍यो । ‘स्पोर्ट्स हिमालय’, ‘साहसिक पर्यटन वर्ष’ नाम दिई यसलाई ब्राण्डिङ गरेर अगाडि जान सक्यौं भने त्यो बढी फलदायी हुन्छ भन्ने मेरो धारणा र सुझाव पनि छ ।
नेपालमा पर्यटकका नयाँ प्रडक्टहरू केके हुन सक्छन् ?
नेपाल प्राकृतिक सम्पदा, सुन्दरताको साथै साहसिक पर्यटनका लागि विश्वकै राम्रो गन्तव्य हो । प्याराग्लाइडिङ, र्‍याफ्टिङ, क्यानोइङ, बञ्जी जम्प, रक क्लाइम्बिङ, वाइल्ड हनी हण्टिङलगायत थुप्रै प्रकारका पर्यटकीय खेलहरू नेपालमा खेल्न र खेलाउन सकिन्छ । एउटा विदेशीले नेपालको हनी हण्टिङको किताब लेखेर, डकुमेण्ट्री बनाएर लखपति बन्यो । हामीले त्यसलाई चिन्न सकेनौं, जहाँको त्यहीँ छौं । संसारमा खेल पर्यटनका लागि नेपाल विश्वकै सर्वोत्तम स्थान हो । यसलाई बुझ्न जरुरी छ । नेपाल गरीब होइन र छैन पनि । हामीसँग त वैभव छ । तर, व्यवस्थापन गर्न नजान्दा गरीब भएर अनि गरीब भनेर बसेका छौं । अब व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्‍यो । यसमा नेपाली निजी क्षेत्र पनि सक्रिय हुनुपर्ने समय आएको छ । हामीलाई हिजो विदेशीले केही सिकायो होला । उसलाई गुरु मान्यौं, अब हामीले पनि धेरै सिक्यौं । आफ्नो क्षमता पहिचान गर्नेतर्फ अग्रसर होऔं । लघुताभासबाट बाहिर निस्किएर समग्र पर्यटनको विकासका लागि लागौं । सबै कुराको सम्भावना हामीसँगै छ ।
विभिन्न समस्या हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय नेपाली पर्यटन उद्योगहरूमा लगानी बढिरहेको छ । निजीक्षेत्र अग्रसर देखिन्छ । समग्रमा नेपालको पर्यटन विकासका लागि अब नगरी नहुने कामहरू केके हुन् ?
मूलकुरा त पूर्वाधार विकास हो । त्यसका लागि राज्यले पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु पर्‍यो । अर्को कुरा, नयाँ प्रडक्ट निर्माण गर्नु हो । होटलमा मात्र अहिले अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ । यो निजी क्षेत्रको मात्र लगानी होइन । एउटा होटल डुब्दा बैङ्क डुब्ने हो, सरकार पनि डुब्ने हो । यो संवेदनशील विषय हो । पर्यटक ल्याउनका लागि विमानस्थल, विमान कम्पनी तथा अन्य सेवासुविधाहरूको वृद्धि जरुरी छ । शहरमा मात्र केन्द्रित नभई ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न जरुरी छ । यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । त्यसरी काम गर्न सकेमा नेपालमा अझै पनि पर्यटन क्षेत्रबाटै धेरै काम गर्न सकिन्छ ।
तपाई सधैं सकारात्मक सोच राखेर अघि बढ्ने व्यक्ति, विभिन्न अभियानमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ । यो अभियानको माध्यमबाट के गर्दै हुनुहुन्छ ?
मैले मेरो व्यवसायमा समय दिन छोडेको ५ वर्षभन्दा बढी भयो । म अहिले ७५ वर्ष भएँ । मलाई अबको ५ वर्ष सक्रिय जीवन जिउनु छ । म क्यान्सर भएर पनि बाँचेको मान्छे हुँ । २ पटक मृत्युको मुखमा पुगेर फर्किएको मान्छे हुँ । बाँकी जीवनलाई त्यसै राख्नुभन्दा मानव हितमा समर्पण गर्ने मेरो चाहना हो । अहिले मैले ‘कर्ण सकारात्मक कोषको’ माध्यमबाट समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भनेर लागेको छु । नेपालमा व्यक्ति धनी बन्दै जाने तर देश सधैं समस्यामा पर्ने स्थिति भयो । मेरो यो अभियान व्यक्ति मात्र होइन, राष्ट्र सफल बन्नु पर्छ । राष्ट्रको सफलतामा नै सबै नागरिकको सफलता अन्तरनिहित हुन्छ भन्ने धारणाबाट प्रेरित छ । यो अभियानको माध्यमबाट हामी अधिकारको साथसाथ आफ्नो कर्तव्य पनि पूरा गर्नतर्फ लागौं । यसले धेरै कुराहरूमा आफै परिवर्तन आउँछ ।